पहिलो त्रैमासमा युनिलिभर नेपालको नाफा ५१ % घट्यो
मंसिर ३, काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू. १२ करोड १ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको नाफा रू. २४ करोड ६३ लाख थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ५१ प्रतिशतले घटेको हो ।
यस वर्ष आम्दानी घटेकाले नाफामा असर परेको देखिन्छ । गत वर्ष रू. १ अर्ब ७६ लाख ४७ हजार कुल आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. १ अर्ब २४ करोड २५ लाख कुल आम्दानी गरेको हो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी २९ दशमलव ५९ प्रतिशत कम भएको हो । यस वर्ष कम्पनीको खर्च भने कम भएको छ । गत वर्ष रू. १ अर्ब ४६ करोड २३ लाख कुल खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १ अर्ब ९ करोड २५ लाख खर्च गरेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९ करोड २१ लाख रहेको छ । सोहि पूँजीको आधारमा गत वर्षको लागि प्रतिशेयर रू. १०० का दरले नगद लाभांश दिने तयारी कम्पनीको छ ।
यो लाभांश प्रस्तावसहित अन्य विविध प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले मंसिर १६ गते २७ औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । लाभांश र साधारण सभा प्रयोजनक लागि कम्पनीले कात्तिक २७ गतेदेखि बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा कात्तिक २६ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि गत वर्षभन्दा १९ प्रतिशत कम कायम भएको छ । गत वर्ष रू. २ अर्ब ४७ करोड ८६ लाख रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्ष रू. २ अर्ब १२ लाख रहेको छ ।
गत वर्ष रू. २६७ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी यस वर्ष रू. १३० रहेको छ । त्यस्तै गत वर्ष रू. २ हजार ७९३ रहेको प्रतिशेयर नेटवर्थ यस वर्ष रू. २ हजार २७४ रहेको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको लिलामी शेयरमा आवेदन गर्ने अन्तिम दिन बुधवार [२०७७ मंसिर, १६]
स्वाबलम्बन लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा उपाध्याय नियुक्त[२०७७ मंसिर, १६]
घटेको बजारमा मंगलवार अपर तामाकोशीको शेयरमूल्यमा सर्किट लेभलमा वृद्धि [२०७७ मंसिर, १६]
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर बुधवारदेखि लिलामीमा[२०७७ मंसिर, १६]
१९७८.०८ विन्दुमा फर्कियो परिसूचक, सर्वाधिक कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको (१ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १६]
स्वाबलम्बन लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा उपाध्याय नियुक्त
१९७८.०८ विन्दुमा फर्कियो परिसूचक, सर्वाधिक कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको (१ बजेको अपडेट)